MADAGASIKARA SY TORKIA : Hihamafy hatrany ny fiaraha-miasa ara-tafika
Mihatsara hatrany ny fifandraisan’i Madagasikara amin’i Torikia. Afak’omaly, nisy ny fihaonana teo amin’ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimaria, ny jeneraly Richard Ravalomanana sy ny masoivohon’i Torkia miasa sy monina eto Madagasikara. 10 octobre 2019
Tetsy amin’ny toby jeneraly Philibert Ramarolahy, Betongolo no nanatanterahana izany. Teboka roa lehibe no niompanan’ny fihaonan’ny roa tonta. Tafiditra tao anatin’izany ny fametrahana ny vovonam-piaraha-miasa sy ny fanatanterahana ireo tetikasa eo amin’ny fifandraisana ara-miaramila. Fantatra nandritra ity fihaonana ity fa hafainganina ny fanatanterahana ireo tetikasa nifanarahan’i Madagasikara sy Torkia mandra-pialan’ity diplaomaty ity eto Madagasikara.
Nodinihina manokana nandritra ny fihaonana ihany koa ny fanaovana jery todiky ny fiaraha-miasa nisy hatramin’izay teo amin’ny Zandarimaria malagasy sy ny firenena Tiorka. Hisy ny fanatsarana sy fanamafisana izany ary hatevenina toy izany koa ny fifanakalozana traikefa eo amin’ny roa tonta toy ny fandefasana zandary hanaraka fiofanana any Torkia sy ny mety ho fanampiana azo atao amin’ny fampitaovana. Anisany firenena efa lasa lavitra dia lavitra amin’ny famokarana fitaovam-piadiana mantsy ny firenena Tiorka.
Nanambara ny jeneraly Ravalomanana Richard fa efa betsaka ny fiaraha-miasa teo amin’ny firenena Tiorka sy ny Zandarimaria hatramin’izay ary nitondra voka-tsoa ho an’ny Zandarimaria izany satria nahafahana nanatanteraka ny adidy aman’andraikitr’izy ireo teto Madagasikara.